Thursday,October 29,2020 16:22 PM
Ex-Vatican official accuses Pope of ignoring abuse claims
S.African farmers 'furious' over Trump lan...
Added 26th August 2018 12:59 PM
"I will protect and promote the rights of Zimbabweans so help me God,"Zimbabwe's Munangagwa.
PIC: Zimbabwe's new President, Emmerson Mnangagwa. (AFP)
HARARE - Emmerson Mnangagwa was officially sworn in as president of Zimbabwe on Sunday after winning a bitterly contested election that marked the country's first vote since Robert Mugabe was ousted from power.
Mnangagwa, whose victory in the July 30 polls was challenged by the main opposition, pledged to "protect and promote the rights of Zimbabweans" in an inauguration ceremony attended by a crowd of thousands at a stadium in Harare.
"I Emmerson Dambudzo Mnangagwa swear that as president of the republic of Zimbabwe I will be faithful to Zimbabwe (and) will obey uphold and defend the constitution of Zimbabwe," Mnangagwa said.
Once Mugabe's right-hand man, Mnangagwa of the ruling ZANU-PF party won the election with 50.8 percent of the vote just enough to meet the 50 percent threshold needed to avoid a run-off against the main opposition led by Nelson Chamisa, who scored 44.3%.
International observers said the polls were largely free of the violence which characterised previous votes in Zimbabwe.
Zimbabwe's top court on Friday dismissed Chamisa's bid to have the results annulled because of allegated of vote rigging.
Karimojong nominate Museveni for LC1
Govt boosts food security in Karamoja
First Lady launches Masuliita kids project